99.9% अमेरिकी डाक्टरहरूले एप्पल वाचलाई मेडिकल उपकरणको रूपमा देख्दैनन् म म्याक बाट हुँ
एप्पल वाच एक यन्त्र हो जसले वर्षौंदेखि हृदय समस्या भएका मानिसहरूलाई मद्दत गरिरहेको छ। वास्तवमा, केसहरू गणना गर्न सम्भव छ जसमा यो वर्णन गरिएको छ कि सेन्सरहरू र घडीको भविष्यवाणीहरूको लागि धन्यवाद, केही हृदय रोगहरू समयमै समातिएका छन् जुन अन्यथा घडीको प्रयोगकर्ताको जीवन समाप्त हुन सक्छ। यद्यपि, यी सबैले अमेरिकी डाक्टरहरूलाई यो उपकरणमा विश्वास गर्दैन। केहि अध्ययनहरु अनुसार, तिनीहरू मध्ये 99.9% ले फलो-अप वा चिकित्सा उपचारको लागि एप्पल वाच प्रयोग गर्दैनन्। यद्यपि, यो अनुसन्धान र धेरै राम्रो नतिजा संग प्रयोग भइरहेको छ।
यद्यपि हामीसँग छ एप्पल वाच को सेन्सर को लागी आफ्नो जीवन बचाउने मान्छे को धेरै घटनाहरु, क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक माइकल ब्रुस भन्छन् कि 99.9% चिकित्सा पेशेवरहरू अझै पनि चिकित्सा क्षेत्रमा यसको प्रयोगको पक्षमा छैनन्। मा फाइनान्सियल टाइम्सको नयाँ लेख, विभिन्न चिकित्सक र चिकित्सा क्षेत्रका अन्य व्यक्तिहरूले विस्तृत जानकारी दिए दैनिक बिरामी हेरचाहमा एप्पल वाच समावेश गर्ने कठिनाइहरू। कतिपयले भने कि एप्पल वाचले वास्तवमा ठूलो मात्रामा प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने भविष्य अझै धेरै टाढा छ।
अब, अनुसन्धानको क्षेत्रमा, यस्तो देखिन्छ कि एप्पल वाचका प्रशंसकहरू छन्। सीडीसीका अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिकामा चिकित्सा हेरचाहमा संयुक्त राज्यमा खर्च गरिएको 3.8 ट्रिलियन डलरको मुख्य वस्तु दीर्घकालीन रोगहरू हुन्। तिनीहरू सामान्यतया व्यायाम, आहार, र प्रारम्भिक पहिचान मार्फत रोक्न सकिन्छ। यो अनुसन्धान र अनुगमनको क्षेत्रमा छ जहाँ यो उपयोगी हुन सक्छ। उदाहरण को लागी:
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता श्रुति महालिंगैयाले एप्पल वाचको धेरै पुस्ताहरू प्रयोग गरिरहेकी छिन्। एक ठूलो अध्ययनमा 70,000 महिलाहरूको ovulation चक्र.
ओक्सनर हेल्थका कार्डियोलोजीका उपाध्यक्ष डा. रिचर्ड मिलानीले हजारौं बिरामीहरूको डाटा पोइन्टहरू निगरानी गर्न र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्नका लागि एप्पल वाचलगायत अन्य प्रयोग गर्दै आएका छन्। नतिजाहरू भविष्यवाणी गर्नुहोस् र कुन मानिसहरू बिरामी पर्न सक्ने सम्भावना छ भनेर निर्धारण गर्नुहोस्।
हामीले अनुसन्धान भन्दा प्रत्यक्ष क्षेत्रमा एप्पल वाच प्रयोग गर्न डाक्टरहरूको लागि पर्खिरहनु पर्छ। यसले पहिलेको कुरालाई सत्य बनाउन मद्दत गर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » धेरै » 99.9% अमेरिकी डाक्टरहरूले एप्पल वाचलाई मेडिकल उपकरणको रूपमा देख्दैनन्
ब्लुटुथ एउटा प्रविधि हो जसले AirPods को गुणस्तर सीमित गर्छ